China 3M-150M Taawarrada Isgaadhsiinta iyo Warshada |Tower XY
Taawarka isgaarsiineed waxaa iska leh nooc ka mid ah munaaradda gudbinta calaamadaha, sidoo kale loo yaqaan munaaradda gudbinta signalka ama munaaradda signalka.Shaqada ugu weyni waxay taageertaa gudbinta calaamadaha waxayna taageertaa anteenada gudbinta signalka.Wuxuu adeegsadaa nidaamka meelaynta dayax-gacmeedka mobilada/unicom/taraafikada (GPS) iyo waaxaha kale ee isgaarsiinta.munaaradda tababarka dabka.
Taawarka isgaarsiintu waxay ka kooban tahay qaybo bir ah sida jirka taawarka, madal, birta, jaranjarada, taageerada anteenada, iwm, waxaana lagu daaweeyaa galvanizing-kulul iyo daawaynta ka hortagga daxalka.Waxaa inta badan loo isticmaalaa gudbinta iyo gudbinta microwave-ka, mowjadda ultrashort iyo calaamadaha shabakadaha wireless.
Si loo hubiyo hawlgalka caadiga ah ee nidaamka isgaarsiinta wireless, anteenada isgaarsiinta guud ahaan waxaa la dhigayaa meesha ugu sareysa si loo kordhiyo radius adeegga si loo gaaro saameynta isgaarsiinta ee la doonayo.
Anteenada isgaarsiintu waa inay lahaataa taawar isgaarsiineed si loo kordhiyo dhererka, sidaas darteed munaaradda isgaarsiintu waxay door muhiim ah ka ciyaartaa nidaamka shabakada isgaarsiinta.
Dhererka Laga bilaabo 10M-100M ama si waafaqsan shuruudaha macmiilka
Qaab Dhinacyo badan ama kooneed
Qalab Caadi ahaan Q235B/A36, Xoogga Yeild≥235MPa
Sidoo kale gariiradda Hot Rolled ee ASTM572, GR65, GR50, SS400
Dulqaadka cabbirka Marka loo eego shuruudaha macmiilka
Daaweynta dusha sare Hot-Dip-galvanized iyadoo la raacayo ASTM123, ama heer kasta oo kale marka loo eego shuruudaha macmiilka
Isku-dhafka tiirarka Kala goysyada simbiriirixidda, geesaha leh ayaa ku xiran
Dhererka qayb kasta 13M gudahood markii la sameeyay
Heerka alxanka AWS(Ururka Welding Society)D 1.1
Baakadaha Ku xiridda warqad balaastik ah ama sida waafaqsan shuruudaha macmiilka
Muddada Nolosha In ka badan 25 sano, waa marka loo eego deegaanka rakibidda
kala saarista shayga
Tower Guyed waxay leedahay muuqaal cusub, dabeecadeeda ugu weynna waxaa lagu xoojiyaa iyadoo la adeegsanayo silig birta ah.
Guyed Tower waa nooc caan ah oo munaaradda isgaarsiinta ah kaas oo ah mid dhaqaale iyo mid la taaban karo.
Way ka fudud tahay oo ka jaban tahay kuwa kale.
Aad bay ugu habboon tahayaagagga ballaaran ee juqraafiyeed.
munaarad iskeed isu taageerta badiyaa waa 3lug oo munaaradda 4lug ah, alaabtiisuna waa bir bir ah ama bir xagal ah.Dhanka isku xirka, munaaradda tubbada waxay ku xiran tahay flange, iyo munaaradda birta xagal waxay ku xiran tahay nuts iyo boolal.
1. iska caabin dabaysha oo xoog badan.
Isku-dhafka yar ee culeyska dabaysha,
2.Save khayraadka dhulka, meel ku habboon.
3.Gaadiidka iyo rakibida ku haboon.
munaaradda hal tuubo oo sidoo kale loo yaqaan munaaradda monopole, oo leh muuqaal qurux badan, oo daboolaya meel yar oo ah 9 ilaa 18 mitir oo laba jibbaaran, kharash - wax ku ool ah, waxaana la qaataa inta badan dhismaha.Jirka Tower wuxuu qaataa qayb macquul ah, kaas oo ku xidhan bolt xoog sare leh.Waxay leedahay sifooyinka rakibaadda sahlan waxayna la qabsan kartaa noocyo kala duwan oo goobta adag.
munaaradda geed ka duuban
Camouflaged Tree Tower sidoo kale waa nooc ka mid ah geedaha cartificial ee munaaradda geedka Bionic, oo ku salaysan sida mid dhab ah, oo lagu daray naqshadeynta, marka la dhex dhigo geedaha dhabta ah ee goobaha daawashada, park iyo square, waxay noqon doontaa qayb ka mid ah dabeecadda.
1. Qaab dhismeed qurxoon, muuqaal qurux badan.
2. Degganaansho dhisme oo xooggan, nolol dheer oo shaqo.
3. Dabool yar, saameyn dhaqaale oo weyn.
Iibka Tooska ah ee Warshada,Waqtiga Hogaaminta Gaaban, Xaqiijinta Tayada
Hel faahfaahin dheeraad ah hadda!
Hore: 10KV-500KV Tower gudbinta
Xiga: Qaab dhismeedka Saldhigga Korontada